TCDD recruits Injinia | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraNtinye akwụkwọ injinịa TCDD
28 / 11 / 2019 06 Ankara, 35 Izmir, Central Anatolia Region, Ọrụ, ụgbọ okporo ígwè, Mpaghara Aegean, General, Isi akụkọ, Turkey
tcdd statistician zụtara injinia na puantor
Republic of Turkey State Railways (TCDD) KPSS akara na ọnụ ọgụgụ, injinia na aha ndị uwe ojii na mpaghara na distrikti dị iche iche na sistemụ na-arụ ọrụ etiti mere ka bọtịnụ maka ndị ọrụ ndị nkịtị.
Razọ Railways Steeti 6 kwupụtara mbanye nke ndị ọrụ ọha na eze na OSYM site na ịgwa ndị ọrụ banyere mkpa ọrụ nke ndị ọrụ iji mejupụta oghere ndị ahụ. E bipụtara koodu ntozu maka ndị ọrụ obodo na Ankara na obodo İzmir Konak.
Usoro oghere mmeri OSYM ga-enweta ngwa
ÖSYM ga-arụ ọrụ niile dị mkpa metụtara usoro ikenye ọrụ yana usoro ntinye. Dịka ọrụ dị n'etiti, ọ nweghị ụlọ ọrụ ọzọ ga-enwe ike itinye aka na nhọpụta ndị ahụ belụsọ OSYM. Ndị ọrụ obodo ga-enyocha ajụjụ ọnụ na ọnụ a ga-ekwu maka ya na ntanetị azụmahịa OSYM.
TCDD ga-ahọrọ ekenye ndị ọrụ statistiki 1, ndị injinia 2, na isi ihe 3 dị ka nkesa ndị ọrụ bipụtara.
MGBE EBIRI EGO
Dabere na ozi e bipụtara na usoro ọrụ etiti etiti 2019 / 2, ngwa ga-amalite na 3 Disemba 2019 ma ga-akwụsị na 12 December. A ga-eme ntanetị n'ime oge a.
ỌR ST EGO Province PC
tally-ukochukwu IZMIR 3
Onye ọrụ gọọmentị TCDD 6 maka nkesa ndị ọrụ Pịa.
Usoro iji tinye akwụkwọ
Datebọchị mbido: 03.12.2019 10: 00
Datebọchị njedebe: 12.12.2019 23: 59
Gwọ Mmasị: £ 20
Ebe ịkwụ ụgwọ: Alaka Akbank, ATM na banki ịntanetị (ewezuga ndị na-arịọ arịrịọ si na TRNC); Ala niile nke Albaraka Türk Bank Partition Bank, ATM na banki ịntanetị (belụsọ ndị na-arịọ arịrịọ na TRNC); Alaka Finansbank, ATM na banki ịntanetị (belụsọ ndị na-arịọ arịrịọ si na TRNC) Alaka Kuveyt Türk Katılım Bankası, ATM na banki ịntanetị (ewezuga ndị na-arịọ arịrịọ na TRNC); Alaka Türk Ekonomi Bankası na banki ịntanetị; Akara Halkbank ATM, banki ịntanetị na alaka; Alaka ING Bank na banki ịntanetị (belụsọ ndị na-arịọ arịrịọ si na TRNC); Alaka niile na ATM nke Vakıf Partpa Bank (ma ewezuga ndị na-arịọ maka TRNC) Iralọ akụ Ziraat na-eji banki intanet na banki mkpanaka (ego anaghị akwụ ụgwọ site na ngalaba na ATMs); Sistemụ Cardkwụ Cardgwọ OSYM (https://odeme.osym.gov.tr/)
Ọrụ: TCDD Ankara Engineer
Mahadum Karabük Onye na-ahụ maka ụgbọ okporo ígwè. Atumatu (Nkwupụta Ikpeazụ)
Job: Engineer Invensys Okporo ígwè Dimetronic na Turkey ga-agba ọsọ
TUVASAS na-ekwupụta ịchọta ndị engineer 19 maka National Train Project
19 Ngwongwo Ngwongwo maka Ngwuputa Uzo Mba
Onye injinia Japanese gburu onwe ya n'ihi nkwụsị ụdọ na Izmit Bridge
TCDD ndị ọrụ ọha na eze nbanye
Usoro Ntinye akwụkwọ Injinia TCDD
Etu esi tinye maka mbanye n'ọrụ TCDD Injinia
Batri zụrụ TCDD